Music LED Shower Systems 5-Function Hot and Cold Shower Valve - Best Kitchen Faucets 2021 | အကောင်းဆုံး ရေချိုးခန်း Faucets | WOWOW Faucets
ပင်မစာမျက်နှာ / ရေပန်းရေချိုးခန်း / ရေပန်းစနစ်များ / ဂီတ LED Shower Systems 5-Function အပူနှင့်အအေးခံအဆို့ရှင်
Music LED Shower Systems 5-Function အပူနှင့်အအေးခံအဆို့ရှင်
အပူထိန်းကိရိယာ shower ရေချိုးခန်းစနစ်သည်ကလေးများကိုလောင်ကျွမ်းခြင်းမှကာကွယ်သောသော့ခတ်သောခလုတ်ကို သုံး၍ ရေအပူချိန်ကို ၃၈ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည်။
? အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ ： ရေချိုးခြင်းစနစ်သည် ကလေးငယ်များကို အပူချိန် 38 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် သော့ခတ်ခလုတ်ကို အသုံးပြု၍ ရေအပူချိန်တွင် ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောကြောင့် ကလေးငယ်များ အရေပြားပူလောင်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ရေချိုးခြင်းစနစ်ကို လော့ခ်ချသည့်ခလုတ်ကို အသုံးပြု၍ ရေအပူချိန် 38 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောကြောင့် ကလေးငယ်များ အပူလောင်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ပုံမှန်ရေအပူချိန်မှာ 38°C ဖြစ်ပြီး ချိန်ညှိနိုင်ပါသည်။
? အင်္ဂါရပ်: မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း WIFI ထိန်းချုပ်မှု၊ ဘလူးတုသ်သီချင်းဖွင့်ခြင်း၊ 64 ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်အပူချိန်ကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။ မိုးအစစ်အမှန်ကို စမ်းကြည့်နိုင်သည်၊ အိမ်တွင် သဘာဝရေတံခွန်အနှိပ်၊ spa spray နှင့် မိုးရေအနှိပ်ခံနိုင်သည်။ ရေချိုးသောအခါတွင် သင်နှစ်သက်သောတေးဂီတကို နားဆင်နိုင်သည်၊ စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့ချကာ တစ်နေ့တာလှုပ်ရှားမှုများကို ပြေလျော့စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပြီး၊ ဘဝကိုပျော်မွေ့ဖို့ရွေးချယ်မှု။
? ထူးခြားသောနည်းပညာ- အပူချိန်ထိန်းရေချိုးခြင်းစနစ်သည် 7-9 လီတာ/မိနစ် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ရေချိုးခန်းအဆို့ရှင်ဖြစ်သည်။ သံချေးတက်ခြင်းမှ ကင်းဝေးစေရန် လျှပ်စစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော နည်းပညာဆိုင်ရာ အလွှာအသစ်7ခု။ သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဤရေချိုးခေါင်းသည် မိုးရွာခြင်း၏ တကယ့်ခံစားချက်ကို ခံစားနိုင်သည့်အပြင် SPA ခန္ဓာကိုယ်ကို နှိပ်နယ်ပေးကာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုနှင့် စိတ်ဖိစီးမှုများကို သက်သာစေသည်။ မင်းရဲ့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု၊ ဘဝကိုပျော်မွေ့ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုပါ။
♔အာမခံ - အဓိကအပိုင်း ၁၀ နှစ်အာမခံ၊ LED မီးနှင့်ရေပိုက်အပေါ် ၁ နှစ်အာမခံ။ သင့်တွင်အရည်အသွေးပြproblemနာရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ
?38 ℃ အပူချိန်ထိန်းရေချိုးခြင်းစနစ်၊ ရေအပူချိန်ကို သော့ခလုပ်ဖြင့် 38 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောကြောင့် ကလေးငယ်များ မီးလောင်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။
ပုံမှန်ရေအပူချိန်မှာ ၃၈ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဖြစ်ပြီးချိန်ညှိနိုင်သည်။
?မိုဘိုင်းဖုန်း WIFI ထိန်းချုပ်မှု (iOS နှင့် Android တို့ကို ပံ့ပိုးပေးသည်)၊ ဘလူးတုသ် သီချင်းဖွင့်ခြင်း၊ ကွဲပြားသော အရောင်အသွေး 64 ကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။
သငျသညျအစစ်အမှန်မိုrain်းကိုရွာစေစမ်းနိုင်ပါတယ်, သင်ကသဘာဝရေတံခွန်အနှိပ်, spa မှုန်ရေမွှားများနှင့်အိမ်တွင်မိုးရွာရွာနှိပ်နယ်နိုင်ပါတယ်။
?5 လုပ်ဆောင်ချက် LED မိုးရေချိုးခြင်း 400 x 400MM- ရေတံခွန်အနှိပ်နှင့် ရေပူစမ်းနှင့် မိုးရေနှိပ်ခြင်းတို့ကို လွတ်လပ်စွာပြောင်းပြီး ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။
တေးဂီတရေချိုးခန်း ဦး ခေါင်း: ဂီတရေချိုးခန်း
LED ဂီတ shower head: ရေချိုးခန်းဂီတ
ဂီတရေချိုးခန်းကုလားကာ: တေးဂီတရေချိုးခန်း ဦး ခေါင်း
Shower ဂီတရေဒီယို: ဂီတရေချိုးခန်းအစုံ
တေးဂီတနှင့်အတူရေပန်း: ဂီတ ဦး ဆောင်အလင်းရေချိုးခန်း
တေးဂီတနှင့်အတူရေပန်းခေါင်း: LED ဂီတမီးပန်းခေါင်း
ကလေးတိရိစ္ဆာန်ဂီတအရိပ်ပန်း Playset: Shower Head